Ikhabhinethi entle kubathandi phakathi kwehlathi
Le ndlu enhle ye-rustic phakathi kwehlathi ilungele isibini; ubumfihlo, ukuthula kunye neendawo ezikungqongileyo ziya kukumema ukuba ukonwabele izidlo zakho kwiveranda okanye kwithafa, ukwabelana ngomlilo wothando okanye ulungiselele izidlo ekhitshini elixhotyiswe kakuhle. Indawo yomlilo ibunewunewu kwaye igumbi lokulala lipholile kakhulu. Uya kuziva unxibelelana nendalo kodwa engekude edolophini, enento yonke kwaye ikwimizuzu elishumi ngemoto.
Zombini ivaranda kunye ne-terrace zikhethekileyo, sinegrill esebenzayo kakhulu eyenza uzive uphakathi kwendalo. Ukulungisa kunye nokutya ukutya kule mimandla mibini bubunewunewu.
Ukuhlamba ngamanzi entwasahlobo ngamava amaninzi, ibhafu kunye namanzi ashushu kuya kukwenza uzive ukhaphukhaphu ...
Lo mmandla unemithi yeSizwe saseHidalgo ugcwele amadama afana neTejocotal, Umilteme okanye iSta. Ana Tzacuala, kwaye kufuphi nendlu (imizuzu eyi-10 ngemoto) ziingxangxasi zaseChimalapa. I-Piedras Encimadas eco-park 45 imizuzu ukusuka e-Acaxochitlán yinto emangalisayo yendalo.
Ukukunceda nguPablo Rosales, umququzeleli wam, unenombolo yakhe yayo nayiphi na imibuzo.